महिनावारी हुँदा कम रगत किन बग्छ - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
महिनावारी हुँदा कम रगत किन बग्छ
कार्तिक ५, २०७४
मेरो मासिक श्रावमा अहिले थोरै मात्र रगत जान्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ?
महिनावारीमा थोरै रगत जाने समस्यालाई हाईपोमेनोरेजिया भनिन्छ । यो अवस्थामा महिनावारी २ दिनभन्दा कम हुन्छ भने थोरै मात्र रगत जान्छ । यस्तो हुनुको कारण गम्भीर नभएर धेरैजसो अवस्थामा मानसिक तनाव, चिन्ता आदि भएको पाइन्छ ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा चिन्तामुक्त रहनुबाहेक अन्य उपचार खासै चाहिँदैन । यसले भविष्यमा सन्तान नपाउने भने हुँदैन, सन्तान पाइसकेपछि यो समस्या आफै हराएर गएको पाइन्छ ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ,
मोरङ सहकारी अस्पताल
वैशाख २, २०७५ - महिला र मुटु रोग
चैत्र २१, २०७४ - कम वा बढी उमेरमा आमा बन्दा आइपर्ने समस्या
चैत्र ६, २०७४ - क्यान्सर
चैत्र ४, २०७४ - छाउपडीविरुद्ध विद्यार्थी जागरण
फाल्गुन ९, २०७४ - मौसम परिवर्तन हुँदा
फाल्गुन ९, २०७४ - महिनावारी, रगतश्राव महिला स्वास्थ्य
स्तन, गर्भाशयको क्यान्सर स्क्रिनिङ कार्यक्रम कार्तिक १७, २०७८
ड्राइफ्रुट्सको स्वास्थ्य रहस्य कार्तिक ९, २०७८
कफीमा क्यालोरी रहस्य आश्विन ७, २०७८
फुड कोचिङ ओभर इटिङले रोग आश्विन ४, २०७८
स्वास्थ्यबर्द्धक ओट्स भाद्र ७, २०७८
महिनावारीको समयमा रगत कम जान्छ ? भाद्र १, २०७८